Maromaro ny olona naratra tamin'ny fanafihana fampihorohoroana tao amin'ny tobim-pahasalamana ao Minnesota
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Maromaro ny olona naratra tamin'ny fanafihana fampihorohoroana tao amin'ny tobim-pahasalamana ao Minnesota
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Crime • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona dimy no naratra voatifitry ny basy, vehivavy ny iray tamin'izy ireo izay naratra voatifitra telo
Ny fanafihana dia tao amin'ny Allina Health Clinic any Buffalo, Minnesota
Voasambotry ny polisy Buffalo ny olona iray voarohirohy
Tsy mbola misy ny fampahalalana momba ny hamafin'ny ratra naratr'ireo niharam-boina na raha nisy ny fahafatesan'izy ireo
Olona maromaro no voalaza fa nentina haingana tany amin'ny hopitaly taorian'ny fanafihana basy sy baomba tao amin'ny Allina Health Clinic any Buffalo, tanàna kely iray 64km avaratra andrefan'ny Minneapolis.
Raha ny filazan'ny governemantam-panjakana dia olona iray ahiahiana ho nanao ny fanafihana no voasambotra ary inoana fa nihetsika irery.
“Toe-javatra nitifitra ity ary fitaovana fanapoahana moto sasany. Tsy mbola voamarina ireo maty na naratra, ”hoy ny governoran'i Minnesota Tim Walz tamin'ny mpanao gazety. Voarohirohy ho polisy iray, izay noheverina ho nanao irery tamin'ny fanatanterahana ny fanafihana.
Olona marobe no naratra tamin'io tranga io, hoy ny solontenan'ny polisy ao an-toerana Kelly Prestidge teo aloha, ary nanampy ihany koa fa tsy fantany ny hamafin'ny ratran'izy ireo na raha misy ny olona maty.
Ny zava-misy dia nofehezin'ny mpampihatra lalàna taloha kelin'ny antoandro ora teo an-toerana ary tsy nisy loza mitatao ho an'ny filaminam-bahoaka intsony, hoy ny Lehiben'ny polisy ao amin'ny Buffalo Pat Budke.
Ny tatitra tamin'ny haino aman-jery mitanisa ny fandefasana feo maika dia nilaza fa hatramin'ny olona dimy no naratra voatifitry ny basy, vehivavy ny iray tamin'izy ireo izay naratra voatifitra telo. Nentina fiara maika sy helikoptera tany amin'ny hopitaly akaiky ireo malaso. Ahiahiana ho tompon’antoka tamin’ireto olon-dratsy ireto.
Nisy fipoahana ihany koa izay nanakorontana ny tobim-pahasalamana, ka nahatonga ny famoahana ireo mpitsabo. "Vao avy nipoaka baomba tany amin'ny toeram-pitsaboana izahay," hoy ny fampitam-baovao, raha ny tatitra avy any an-toerana.
Nilaza ny FBI fa nandefa teknisianina momba ny baomba tany amin'ilay tranokala izy ireo, saingy tsy afaka nanamarina ny fisian'ny baomba iray teny an-toerana.